မှင်စာများနဲ့ မစ္စတာ စပိုက်ဒါဝှစ်ခ် (The Spiderwick Chronicles) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » မှင်စာများနဲ့ မစ္စတာ စပိုက်ဒါဝှစ်ခ် (The Spiderwick Chronicles)	14
Posted by အောင် မိုးသူ on Jan 22, 2016 in Creative Writing, Drama, Essays.., Movies/TV | 14 comments
ဟောလိဝှဒ်က ၀တ္တုကတဆင့် ပြန်ရိုက်တဲ့ မှော်ဆန်ဆန်ကားတွေကာ တော်တော်လေး ပေါက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အထင်ရှားဆုံးပြပါဆိုရင် ဟယ်ရီပေါ်တာပါ။ ဟယ်ရီပေါ်တာလို နောက်ထပ်ထွက်လာတဲ့ ဇာတ်ကောင်က
ပါဆီဂျက်ဆင်ပါ။ ပါဆီဂျက်ဆင်ကတော့ ဟယ်ရီပေါ်တာလောက်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။
ပါဆီဂျက်ဆင်ဟာ နတ်ဘုရားတွေရဲ့ ဇာတ်လမ်းနဲ့ ဆက်စပ်နေလို့ သိပ်မနှစ်သက်မိသလို။ ဟယ်ရီပေါ်တာ
နောက်ပိုင်းမှာ ၀တ္တုကနေ့ အသက်သွင်းခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတကားဟာတော့ ကျတော့်အတွက် ခုထက်ထိ
မရိုးနိုင်တဲ့ ရသတစ်ခုပေးလို့နေပါသေးတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေး အကြော်ငးရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့ အခုမှ ရေးဖြစ်
၂၀၀၈ ခုနှစ်က ထွက်ခဲ့တာမို့ ကြာခဲ့ပြီဆိုပေမယ့် မှတ်မှတ်ရရ အဲ့သည်ဇာတ်ကားထွက်ထွက်ချင်း Box Office မှာ
Top 1 ကိုချိတ်ခဲ့တာလည်း မှတ်မိပါသေးတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ မှောပညာနဲ့ သိပ်မဆိုင်သလို ၊ နတ်ဘုရားတွေ
ဇာတ်ကားနာမည်ကတော့ “The Spiderwick Chronicles” ပါ။
ဆိုင်မွန်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးမှာ သူ့ရဲ့ အမွှာညီအစ်ကိုရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့မှာ အစ်မတစ်ယောက်လည်း
ရှိပါသေးတယ်။ သူ့မိခင်ဟာ သူ့ဖခင်နဲ့ ကွာရှင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ သူတို့ဘိုးဘွားပိုင် အိမ်တစ်အိမ်ကို ပြောင်း
ဆိုင်မွန်ရဲ့မိခင်ဟာ အိမ်ထောင်ကွဲသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဆို ဆိုင်မွန်ကို မပြောဘဲ လျို့ဝှက်ထားပါတယ်။
ဆိုင်မွန်တို့ ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ အိမ်ဟာ မြို့အစွန်တောအုပ်နားက အိမ်ကြီးတစ်အိမ်ပါ။ ယခင်က ဆိုင်မွန်အဘိုး
ဖြစ်သူပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်ပါ။ ဆိုင်မွန် အဘိုးရဲ့ သမီး ဆိုင်မွန် အဖွားကတော့ ဘိုးဘွားရိပ်သာမှာ နေထိုင်ပါတယ်။
တစ်နေ့ ဆိုင်မွန်ဟာ အိမ်ကြီးရဲ့ နေရာတစ်ခုက အသံတစ်ခုကြားရာနောက်လိုက်ရင်း သေတ္တာတစ်လုံးကို
တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သေတ္တာကို ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဆိုင်မွန်တွေ့လိုက်ပါတယ်။ စာအုပ်ရဲ့
မျက်နှာဖုံးမှာတော့ “Spiderwick” မှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Spiderwick ဆိုတာ ဆိုင်မွန်အဘိုးဖြစ်သူရဲ့ နာမည်ပါ။
ဆိုင်မွန်ဟာ စာအုပ်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ အမှားတစ်ခုကို ကျူးလွန်မိသွားတယ်ဆိုတာ မသိသေး
ပါဘူး။ ဆိုင်မွန်အဘိုးဖြစ်သူစာအုပ်ထဲက ပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မမြင်နိုင်တဲ့
မှင်စာ ၊ ပြိတ္တာနဲ့ နတ်သမီးသေးသေးလေးတွေအကြောင်း အသေးစိတ် ရေးထားတဲ့စာအုပ်ဆိုတာ……………..။
မှင်စာ တွေ ပြိတ္တာေးလတွေပါတာမို့ ကျွန်တော်တို့ ပရလောက အယူအဆလေးတွေလည်း အနည်းငယ်
ပါဝင်နေပါတယ်။ ယုတ္တိရှိရှိဇာတ်ကားလေးတစ်ကားလည်ဖြစ်တာမို့ စွန့်စားခန်း နဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖိုအပါအ၀င်
တွေးစရာလေးတွေပါတာမို့ ဒီဇာတ်ကားဟာ ကလေးအကြိုက်ဇာတ်ကားတစ်ကားထက် ပိုတာမို့ မမေ့သေးဘဲ
ကြိုက်နှစ်သက်မိနေတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားအဖြစ် ကျွန်တော်အမှတ်ရနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ခင်ဇော် says: မကြည့်ဖူးခဲ့ဘူးလားး မသိ။
မမဂျီးလည်း မအားတာ ရုပ်ရှင်ကြွေးတွေ တင်နေပြီ။
အောင် မိုးသူ says: ကြည့်ကြည့်မကြီး ကောင်းတယ်။
alinsett says: .မှော်ဆန်တဲ့ကားတွေကို သိပ်တော့ အကြိုက်ကြီးမဟုတ်…
ဟယ်ရီပေါ်တာကိုတောင် … ရုပ်ရှင်ထက်… စာအုပ်ကို ပိုသဘောကျတာ..
ရုပ်ရှင်ကို ထပ်ခါထပ်ခါ မကြည့်ချင်ဘဲ… စာအုပ်တော ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်ဖတ်မိသေးတယ်။
(မင်းခိုက်စိုးစန် ဘာသာပြန်တာကို ပိုသဘောကျတယ်။)
အခု အမသ ညွှန်းတဲ့ ကားလေးလည်း ကြည့်ချင်လာတယ်။
.နောက်ပိုင်း ကြိုက်မိတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကတော့… Seventh Son ကို သဘောကျမိ… ။ အဲ့ထက် ပိုသဘောကျတာက… ဒီကား… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ဒီကားက မှော်မဆန်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မမြင်ရဘဲ ရှိနေတဲ့ မှင်စာတွေ ၊ ပြိတ္တာတွေ ၊ နတ်သူငယ်လေးတွေပါ ပါတယ်။
ခင်ဇော် says: Seventh Son ကို မင်းသားတွေက လွဲရင် မကြိုက်ဘူး
ခုခွိ(စ) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 527
ဂျက်စပဲရိုး says: ဒီကားကြီးကို အထူးပြုလုပ်ချက်တွေက လွဲလို့ ကျန်တာ သိပ်မကြိုက်။
ဇာတ်ကျောတူ ကာတွန်းကား Prince Of Egypt နဲ့ Ten Commendents ကို ပိုသဘောကျ။း)
Exodus နာမည် တူတာချင်းဆို အစ္စရေး တွေ အကြောင်း ရေးထားတဲ့ Exodus စာအုပ် ကို အလွန်ကြိုက်
ဆရာ မောင်မိုးသူ ဘာသာပြန်ထားတာ ရှိတယ်။း)
ဦးကြောင်ကြီး says: အောင်မိုးသူ ကြောင်ခိုးယူ တောင်ရိုးဂူ မှောင်ပိုးဖြူ
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ကျိလဲ ကျိချင်တယ်
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ကျိဘူးတယ်
အောင် မိုးသူ says: ကြည့်ဘူးလား ကောင်းတယ်နော်။
Wow says: ဟိုတလောက mrtv4 မှာလာသွားသေးတယ်၊ ကောင်းပါတယ်ကားလေးက
အောင် မိုးသူ says: mrtv4က အင်းဂိတ်ကားပြလား
လုံမလေးမွန်မွန် says: အဲလိုကားမျိုးလေးတွေ သိပ်ကြိုက်တာ . . .
စိတ္တဇတွေ လူသတ်ကားတွေ သရဲကားတွေတော့ လုံးဝမကြည့်ဘူး . . . ကိုအောင်မိုးသူဆီက ဇာတ်လမ်းလေးတွေ တောင်းဦးမှပါလေ ဟိ
အောင် မိုးသူ says: ဖိုင်တွေသိမ်းထားတာတော့နည်းတယ် အခွေတွေတော့ရှိတယ်။